Roy Galán: onye bụ onye na akwụkwọ ndị edere akwụkwọ a | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Foto foto Roy Galán: Elle
Ọ bụrụ na e nwere otu onye edemede a maara nke ọma na ọ bụ, enweghị obi abụọ, Roy Galán. Onye edemede a, onye na-ede akwụkwọ akụkọ, onye na-eme ihe ike na nwanyị na-eme ihe dị ukwuu. O nwedịrị ike ịbụ na ị ma ya n’ihi na ị gụọla gbasara ya ma ọ bụ ihe ị hụrụ na soshal midia ma ọ bụdị na tiivi.
Mana o nwere ike bụrụ na ị maghị ya, na maka nke ahụ anyị ga-anwa ịkọgharị gị onye bu Roy Galán, otu o si ede na kedu akwukwo o dere. Anyi ka anyi bido?
1 Ọnye na-bụ Roy Galán
1.1 Mmalite nke oru gi
1.2 Roy Galán dị ka nwanyị
2 Akwụkwọ Roy Galán
Ọnye na-bụ Roy Galán
Isi mmalite: Canarias7
Ihe mbụ ị kwesịrị ịma banyere Roy Galán bụ na, n'eziokwu, ọ bụghị ezigbo aha ya. Na aha onye edemede a bụ Roy Fernández Galán. Agbanyeghị, o nyere aha nna ya ka o bute nke abụọ ụzọ. N'ihi ya, e gosipụtara ya.
Amuru ya na December 22, 1980 na Santiago de Compostela mana, agbanyeghi na amuru ya na Galicia, nke bu eziokwu bu na otutu oge nwata adighi ebe ahu, kama na Canary Islands. Ọzọkwa, ezinụlọ ya abụghị n’ezinụlọ gị; O si n'ezinụlọ na-enwe mmekọ nwoke na nwanyị na n'oge na-adịghị anya, ọnwụ nke otu n'ime nne ya, Sol, nwụrụ mgbe ọ dị nanị 13 afọ. N'ihi ya, ọ nọrọ naanị nne ya, Rosa.
Ọzọkwa, ị kwesịrị ịma banyere onye edemede a na o nwere nwanne ejima, Noa Galán.
Na ọkwa agụmakwụkwọ, Roy Galán gụrụ Iwu na Mahadum La Laguna ma gụọ akwụkwọ na 2003. Ruo afọ iri na otu ọ na-arụ ọrụ na nchịkwa nke Gọọmentị nke Madrid mana, na 11, ahụhụ na-ede ya nwere nsogbu na ya wee malite ịrara onwe ya nye ọrụ a kpamkpam.
Na mgbakwunye, na 2017 ọ nọ na ndepụta nke Íñigo Errejón na Assembly Citizen nke Podemos, yana na 2019 na More Madrid na Madrid City Council na Manuela Carmena.
Mmalite nke oru gi
Isi mmalite: Lavozdelsur
Roy Galán abụghị nwoke nke lekwasịrị anya na akwụkwọ. O nwere otutu ihe. Ma ọ bụ na, onye isi n’ime ha, bụ onye edemede. A maara na ọ bụ nwa akwụkwọ na arianlọ Akwụkwọ Canarian nke Literary Creation na ebe obibi akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ, uri, akụkọ dị mkpirikpi, ihuenyo, nyocha ihe nkiri ... yana nkuzi na Literary Creation, Nnwere onwe nke Expressive Resources ma ọ bụ ọbụlagodi na Vademecum Onye edemede .
Ọ pụtara ìhè nke ukwuu n'ụlọ akwụkwọ na ọ kụziela nkuzi na isiokwu dị iche iche n'onwe ya.
Oge izizi o bipụtara akwụkwọ bụ afọ atọ mgbe ọ gbadoro anya na ide, na-enweghị ike imegharị ya. Otú ọ dị, a maara na, na Canarian School of Literary Creation, o dere ọtụtụ akụkọ na egwu «Ma si otú a ga - adị ruo mgbe ebighi ebi», ya na ndị ọrụ ibe ndị ọzọ.
Na 2019 ọ natara Krámpack Award site na Extremadura International LGBT Festival.
Ya onwe ya na-akowa uzo o si ede ihe dika "ihe nfe"Ewezuga eziokwu ahụ iji mezuo ederede a nke na-eme ka ndị mmadụ jụọ ajụjụ n'ime esemokwu na esemokwu, ọ dịla mkpa ọzụzụ dị mma iji mee ya. Ọ bụkwa otu n'ime ndị edemede na-agwakọta ederede na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na-atụle nke ahụ ide ihe bụ "ihe ndọrọndọrọ ọchịchị."
Na mgbakwunye na ọrụ ya dị ka onye edemede, ọ bụkwa onye na-ede akwụkwọ. N'ezie, ọ na-arụkọ ọrụ maka akwụkwọ akụkọ ahụ BodyMente, maka akwụkwọ akụkọ dijitalụ Ihe a na-ahụkarị na ọbụnadị nwere oge isonye na weebụsaịtị LaSexta.
Na 2013, mgbe ọ kpebiri ịrara onwe ya nye ide, Roy Galán mepụtara weebụsaịtị Facebook. Ọ bụ ọrụ ya ka ịmechaa otu Community Manager ma ọ malitere ide ihe na ya. Ihe ọ na-akwụsịbeghị ime, ọbụghị naanị na Facebook, kamakwa na Twitter na Instagram. Ma ị kwesịrị ịmara na ihe niile ọ na-ede ka a na-ahụ ma na-akọrọ ọtụtụ puku mmadụ, ya mere ọ bụrụla onye na - emetụta ya.
Roy Galán dị ka nwanyị
Ihe ọzọ mere eji mara Roy Galán bụ maka ya nkwupụta ihu ọha nke ndị nwanyị, yana enyi nwanyi. Ekwesiri iburu n'uche na n'ime akwukwo ya o kwuru okwu banyere nwanyi, tinyere na ntaneti ndi mmadu na n'ime akwukwo o na-ebiputa na ulo oru mgbasa ozi.
N’ezie, o sonyere n’akwụkwọ Nuria Coronado dere, Menmụ nwoke maka ịha nhata dịka otu n’ime ụmụ nwoke a gbara ajụjụ ọnụ.
Akwụkwọ Roy Galán
N’ịtụle akụkụ ya nke akwụkwọ, Roy Galán nwere ọtụtụ akwụkwọ na ahịa. Onye nke mbụ ha, Irrepetible, bipụtara na 2016 yana ụlọ obibi akwụkwọ Alfaguara. Otú ọ dị, ọ bụghị nke ikpeazụ n’ime ha, mana o nwere ọtụtụ ndị ọzọ.
Como nwere akwụkwọ nwere:
Enweghị ike ikwughachi.
Ọ dịghị onye n'ime gị.
Mee ka ọ ghara ịdị ka ịhụnanya.
Edeela ọnụ ọgụgụ ka ukwuu n'ime ha na ụlọ obibi akwụkwọ Alfaguara, belụsọ Mee ka ọ dị ka ịhụnanya na Las alegrías nke mere ya na Ink Cloud na Continta ị nwere m n'otu n'otu. Na mgbakwunye, ọ bụkwa naanị ha ka edepụtara n'otu afọ ebe ha na-ewepụta akwụkwọ ọhụrụ naanị otu ugboro n'afọ.
Na mgbakwunye na akwụkwọ ndị ode akwụkwọ ya, ọ ebipụtawo na ọrụ ọrụ, dika ha di:
(h) n'anya 3 ekworo na obi amamikpe.
(h) 4 hụrụ onwe ha n’anya.
Na-echezọghị akwụkwọ ọ wepụtara na Canary Islands School of Literary Creation, «Ma otu a ka ọ ga - adị ruo mgbe ebighi ebi».
Ugbu a ị matara Roy Galán ntakịrị, ị na-ama jijiji na akwụkwọ ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Roy Galan